Sacudi Carabiya oo beenisay in Amiir Salman uu la kulmayo Netanyahu - Jowhar Somali news Leader
Home News Sacudi Carabiya oo beenisay in Amiir Salman uu la kulmayo Netanyahu
Sacudi Carabiya oo beenisay in Amiir Salman uu la kulmayo Netanyahu
Wasiirka Arrimaha Dibbadda ee Sacudi Carabiya ayaa beeniyay warar sheegayay in ay suurtogal tahay Dhaxal Sugaha Maxamed Bin Salman uu la kulmayo Ra’iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.
Amiir Faisal bin Farhan ayaa u sheegay shabakada Al Arabiya in uusan jirin wax kulan ah oo la qorsheeyay Sacudi Carabiya iyo Israel.
“Siyaasadda Sacudi Carabiya waxa ay ahayd mid cad tan iyo markii uu bilowday khilaafka,mana jiro wax xiriir ah oo u dhexeeya Sacudiga iyo Israel waxayna Boqortooyada garab taagan tahay Falastiin.”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibada Sacudi Carabiya.
Ra’iisul Wasaaraha Israel ayaa bishii hore booqday Aqalka Cad waxaana halkaas uu Madaxweynaha Maraykanka ku dhowaaqay qorshe la xiriira qadiyada Falastiin waxaana ka soo horjeestay dhammaanba wadamada Islaamka iyo weliba dalal kale.
Netanyahu ayaa wajahaya dambiyo la xiriira musuqmaasuq balse waxaa uu raadinayaa in markala la soo doorto bisha soo socota doorasho ka dhacay Israel. Dhowaan ayuu Netanyahu la kulmay hogaamiyaha Sudan kadib markii uu booqday dalka Uganda.